Ugwu Ugwu, na Norway | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Atụmatụ, Norway
Otu n'ime ihe ndị mara mma kachasị mma ịhụ bụ ihe a na-akpọ ugwu ọkụ ma ọ bụ aurora borealis. Lee ihe ngosi oyi a na-enye anyị n'ebe ugwu! Enwere ọtụtụ ebe ọ ga-ekwe omume ịhụ ọkụ ndị a, n'akụkụ ụwa niile, mana ebe a na Europe ebe ahụ Norway.
La Norwey onye ugwu ugwu Ọ bụ otu n'ime ebe ndị njem nlegharị anya kachasị ewu ewu ma na-achọ ịmalite, yabụ, isiokwu nke taa bụ nke a raara nye ndị mmụọ ndị a na-acha uhie uhie na-agafe igwe igwe.
1 Ugwu Ugwu
2 Ugwu Ugwu na Norway
Nke a eke eke na-eme mgbe ihe igwe na-adaba na ala ndọta nke ụwa, ihe mgbochi nchebe nke otu. Ma ụfọdụ na-achịkwa ịgafe wee mepụta ọkụ ugwu ahụ, ọkụ nke yiri ka ọ na-akwa uwe mgbokwasị nke na-agafe na mbara igwe na agba dị iche iche, oroma, ọbara ọbara na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọ bụ ezie na nke ikpeazụ a na-enwe mmeri mgbe niile.
Ọ bụ ezie na a na-ahụ ihe ngosi a karịa na North osisi ọ bụ ihe na - eme n’osisi abụọ a ọ bụkwa ya mere ha ji dịrị ugwu ọkụ na ndịda auroras. Hụ ọkụ ọkụ dị na mgbago ugwu dị mfe, ọ bụ ya mere enwere ọtụtụ ebe ọhụụ ma ọ bụ ọtụtụ ọnọdụ ihu igwe na-adịkarị mma maka ịhụ ha, na Norway na Iceland.
Ugwu Ugwu na Norway
Anyi no na mbido oge ka anyi lee Northern Light in Norway. Oge a sara mbara, ọ na-amalite site na ụbọchị ndị a, njedebe nke Septemba, mmalite nke Ọktọba, rue ngwụsị Machị.. N'ebe a, ọ na-agba ọchịchịrị n'isi ụtụtụ ka ị wee nwee ike ịhụ ọkụ ugwu site na mgbede ruo n'isi ụtụtụ, mana ọ ga-abụrịrị ọchịchịrị ka ọ dị mma ịhụ palette agba na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, acha anụnụ anụnụ, pink, oroma na odo odo.
Ma nke a bụ ihe okike dị otú ahụ N’agbanyeghi na enwere ike ibu amụma ụfọdụ, ọ nweghị nke ziri ezi. Enweghị ụzọ ọ bụla e si enweta ahụmịhe ahụ, agbanyeghị na mbara ala ndị mara mma nke Norway ga-enye gị akwụkwọ ozi kaadi-echefu echefu. Ee n'ezie, enwere ohere karịa iji hụ ebe ugwu na-acha ọkụ mgbe ihu igwe kpọrọ nkụ na oyi ma taa ihu igwe nwere ike inyere anyị aka ịka akara ahụ.
Ya mere, Kedu ebe kachasị mma iji hụ ebe ugwu ugwu na Norway? N'ụzọ bụ isi na ebe anọ: mpaghara Lyngenfjord, Narvik, North Cape na Senja. Lyngenfjord O nwere fjord mara mma nke dị kilomita 82, nke nwere glaciers na-acha ọcha na nke na-acha anụnụ anụnụ na nnukwu ugwu ndị dị ebube nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku mita abụọ elu. Getga ebe dị mfe ma ọ bụ n'okporo ụzọ, ụgbọ mmiri ma ọ bụ ụgbọ elu. N'ebe a, ị nwere ike ịme ski, ịme egwuregwu n'èzí, njem mmụta niile, ma ị nwekwara ike iku njegharị iji hụ aurora.
Ee, ebe a ị nwere ike ịnọ iji hie ụra na ndị ahụ iko ụlọ ya mere, mara mma, na Crystal lavvos. E nwere naanị isii na ọ bụghị ihe dị ọnụ ala, mana enweghị mgbagha ọ bụ echefughi ya. Njegharị dị otú ahụ gụnyere njem ụgbọ mmiri 90 nkeji, ndu, nri na mmemme niile, uwe na-ekpo ọkụ, ebe obibi. Njem nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa 18.
Maka akụkụ ya Narvik bụ ezigbo ebe ezumike ezumike na otu n'ime ọnụ ụzọ ámá Arctic. A na-enwekarị ọnọdụ dị mma nke ukwuu ebe a iji hụ Northern Lights, nke ugwu gbara gburugburu ihe karịrị otu puku na narị ise n’ogologo ma nwee oke fjord. O bu kpomkwem si n'elu narvikfjellet ka echiche nke elu igwe di nma, ma n’obodo, enwere otutu ulo oru ndi nwere ike idoziri gi njem. "Ichu nta n'ihi ugwu ugwu".
Njem ndị a na-akpọga gị n'ugwu, ebe ọkụ na-enweghị ọkụ na mbara igwe nwere ike ịhụ ya n'ọchịchịrị ya niile, nke kpakpando jupụtara, yana njem naanị nke kpakpando na-agbapụ, niile anwansi. Nwere ike debanye aha ruo oge ụfọdụ nke ụbọchị, na agbanyeghị na ọ nweghị onye na-eme ka obi sie gị ike na ị hụrụ ọkụ, na-abanye n'ugwu, na-a drinkingụ ihe na-ekpo ọkụ ma na-anọdụ ala gbaa ọkụ kwesịrị ahụmịhe ahụ.
A na-ahụkwa Ugwu Ugwu site na Ugwu North, Ọnụ ọnụ mpaghara ugwu nke na-ejedebe ugwu a dị elu nke 307 mita n'ịdị elu. Echiche nke Osimiri Barents na mbara igwe bụ ihe icheta. Nke a akwa dị na agwaetiti Mageroya na ọ bụ ewu ewu na ndị njem, ọkachasị n’oge oyi, ebe mgbagharị na-ewere ọnọdụ n’etiti abalị.
N'ikpeazụ, Senja bụ ebe dị anya, dị jụụ ma dị ọcha. Senja bu agwaetiti nke abụọ kacha na Norway, bụ ebe ikuku kacha ọcha n'ụwa. Okirikiri ala nke ugwu di elu nke rapaara n’osimiri bu ubochi nke ubochi na iji ugbo ala na-ejighari akwukwo ozi a, n’okporo uzo di warawara nke di otutu puku oge, abughi ihe echefu echefu.
N'ụzọ bụ isi Ndị a bụ ebe kachasị mma iji hụ Ugwu Ugwu na Norway, mba a ma ama na nke a. Ọ bụ ezie na, anyị na-ekwu ya ọzọ, ọ dịghị ihe na-emesi obi ike. Nkebi ahịrịokwu ahụ na-agbasa ọtụtụ na ọ bụ otu n'ime ebe kachasị mma iji hụ ọkụ ugwu ebe ọ bụ na mba ahụ dị n'okpuru oval nke auroras, mana nke a abụghị eziokwu kpamkpam ebe ọ bụ na o doro anya na a na-ahụ ihe a site na ebe ndị ọzọ.
Mana ihe onye ọ bụla enweghị ike ịgọnahụ bụ nke ahụ A haziri Northern Norway maka ịnụ ụtọ Ugwu Northern. Nke ahụ bụ eziokwu. Enwere ụlọ ọrụ njem nlegharị anya dum emere gburugburu ọkụ ugwu, yana bungalows iko, ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị njem, ihe ndị metụtara ya, ndị njem abalị, ọtụtụ ụlọ oriri na ọ andụ andụ. Naanị ị ga-enwe ndidi ma ghara ịbata na-eche na chi ọbụbọ ga-enye anyị oge anwansi ya.
Gịnị bụ Ngwunye Ugwu? Ezigbo igwefoto foto otutu, a obosara n'akuku nwere ike na-efu efu, batrị mapụtara, tripod, na ndammana kacha mma uwe oyi ị nwere. Ikpeazụ n'ọnụ: gaa ebe ugwu dị ka o kwere mee, ma ọ dịkarịa ala ruo mgbe Bodo. Buru n'uche na site na Oslo ma ọ bụ Bergen nke Arctic Circle dị anya, ihe karịrị awa 16 n'ụgbọ ala ma ọ bụ 19 n'ụgbọ okporo ígwè, yabụ na ị ga-aga ụgbọelu ...
Gaghị anọ ụbọchị abụọ ma tụọ anya ịhụ Ọwụwa Ugwu. Ọ bụrụ na ị gaa njem dị anya site na mgbago mgbago ugwu, ị ga - echekwu ụbọchị ole, ogologo oge ị ga - anọ, ohere ị ga - enwe Ọ bụrụ na oyi atụghị gị, ikekwe ọnwa Nọvemba, Disemba na Jenụwarị agaghị adabara gị n’ihi na oyi na-atụ dị egwu. Tụlee ngwụcha Septemba, Ọktọba, Febụwarị ma ọ bụ Machị, ma gbakwunye na ebe ndị ị kpọrọ aha Tromsø, las Agwaetiti Lofoten, las Agwaetiti Vesteralen, obere fjord nke Alta, Svalbard, Varanger na Helgeland.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Norway » Ugwu Ugwu, na Norway
Gaa na Edinburgh Castle